Kutheni ii-headphone zika-Apple zihlala zimhlophe | Ndisuka mac
Kutheni iApple Headphones Ihlala Imhlophe
Iifowuni ze-Apple ezisezindlebeni zihlala zimhlophe. Ukusuka kwi-wired yokuqala nge-iPod yokuqala yavela kwiminyaka engama-20 eyadlulayo kwi-AirPods Pro, bahlala begcina umbala wabo mhlophe qhwa ukungangcoliswa.
Akukho nanye inguqulelo kubo eye yanenqaku lombala. Ngangoko izixhobo ezihamba nefayile ye- AirPods batshintshe umbala ngokonyaka, bahlala bemsulwa kwaye bemhlophe ngaphandle kwefashoni kunye neendlela. Oku kungenxa yengcamango yokuqala eye yanyamezela kule minyaka idlulileyo. Kodwa mhlawumbi izinto ziya kutshintsha ...
I-Apple ibithengisa iPod phantse iminyaka engama-20, kwaye okuninzi kutshintshile ngokuhamba kwexesha. Kodwa inye into ihleli injalo: ii-headphone zihlala zimhlophe. Ukusuka kwii-headphone ze-3,5mm ezineentsimbi ukuya kuMbane, ukusuka kwii-AirPod zokuqala ukuya kwi-AirPods Pro, iApple ihlala inyanisekile kumbala wayo omhlophe oqaqambileyo.
Kodwa kutheni iApple ineePods ezinemibala, iPhones ezinemibala, iApple Watch enemibala, ii-iPads ezinemibala kwaye nangoku iiMacs zinemibala, kodwa ii-headphone ngaphakathi zisemhlophe na? Makhe sibone imbali ...
Uyilo belusoloko ludlala indima enkulu eApple. Inkampani ifuna ukuthengisa iimveliso ezizodwa ezinokuthi zibonwe ngabantu ngokulula. Esi sesinye sezizathu, kutheni iApple yayihlala ibeka ifayile ye logo shiny on your MacBooks, so you could tell it was a Mac from a great distance.
IiBeats ezintsha zikwimibala emithathu. Ngaba kuya kwenzeka okufanayo kwii-AirPods ezilandelayo?
Okufanayo kuya kwiapile ngasemva kwee-iPhones. Ukuba kukho umntu othethela i iPhone, ungabona ukude ukuba sisixhobo seApple. Ngaphandle kokuba uyigubungele ngekhava, kunjalo.
Nangona kunjalo, xa iApple yazisa i-iPod kwifayile ye- 2001, inkampani yagila ingxaki enkulu: abantu esitratweni kufuneka bazi njani ukuba umntu usebenzisa i-iPod ukuba isepokothweni? U-Apple wasifumana isisombululo kule ngxaki. Awunakuyibona i-iPod xa umntu eyisebenzisa, kodwa uyabona iihedfoni.
Indlela yokwahlulahlula kwabanye
Nangona kunjalo, ii-headphone zazincinci ukuba zibeke ilogo ebonakalayo yeApple kubo. Yiyiphi enye indlela onokubenza ukuba babonakale ngokulula?
Kwavela ukuba, kwiminyaka engama-20 eyadlulayo, uninzi lwee-headphone zazinjalo abamnyama. Ke ngoko, u-Apple uthathe isigqibo sokuyila i-iPod kunye nee-headphones ngendlela ethe ngqo: emhlophe. Usenokukhumbula isikhangiso esidala se-iPod apho ii-silhouettes zazingqungqa kwii-headphone ezimhlophe- nalapha, i-Apple izabalazile ukungagxili kwi-iPod ngokwayo, kodwa nakwii-headphone ezimhlophe ezimhlophe ngokunjalo.
Kwaye olu luvo lunyamezele ngokuhamba kwexesha. U-Apple ebefuna iminyaka emininzi ukuba aqhubeke nokudibanisa umfanekiso ukuba zii-headphone ezimhlophe, kunjalo iapile. Namhlanje le ngcinga ayisasebenzi. Mva nje kukho imiqondiso yokuba oku kungatshintsha.
Kuqala nge Ii-AirPods eziphezulu. Unayo ngemibala emihlanu onokukhetha kuyo. Kodwa ke sisixhobo esikhulu kwaye sinokuchongwa ngokulula. Akunyanzelekanga ukuba babe mhlophe ukuze bazi ukuba bavela eApple. Kwaye uphawu lwesibini zii-Beats zehedsethi ezizezika-Apple. Unazo ezimhlophe, zibomvu namnyama. Mhlawumbi sisilumkiso ngemibala yee-AirPods ezilandelayo ... okanye hayi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Kutheni iApple Headphones Ihlala Imhlophe
UGlenn Vala ukuthatha inxaxheba kwisizini yesibini yochungechunge lweTehran
I-Apple TV + ifumene phantse i-400 yokutyumba amabhaso okoko yasungulwa